mairie-antananarivo – Fanesorana affiche na peta-drindrina- Boriboritany fahatelo (CUA)
administrateur 24 septambra 2018 Commentaires fermés
Izany dia notarihan’ny lefitra faharoan’ny delegen’ny boriboritany fahatelo Herimanantsoa Raliderson. Arak’izany dia nisy ny fanesorana ireo peta-drindrina , ny famafana ny lalana ary ny fandraofana ny fako ary rehefa vita izay rehetra izay dia nisy ny fitifirana ranom-panafody ny toerana voadio izay notanterahan’ny avy ao amin’ny BMH, na ny depatemanta misahana ny fahasalamana mba hamono ireo mikraoba rehetra ary fiarovana amin’ny areti-mifindra pesta ihany koa.
Tonga niaraka nisalahy nanadio tamin’izany ny ekipan’ny boriboritany fahatelo ny avy ao amin’ny BMH ary ireo tanora TIM avy ao amin’ny boriboritany. Ny anton’izao hetsika izao dia hita fa tena miparitaka sy mivangogo ny peta-drindrina, indrindra ireo tsy ara-dalàna mipetaka etsy sy eroa ary ny fahitana ny tanàna maloto . Mbola hitohy izao hetsika izao fa tsy tamin’io andro io fotsiny hoy ny tompon’andraikitra.